Ny fandroahana ny zazakely avy amin'ny tratra dia dingana tena lehibe, tokony hanapa-kevitra amin'ny, handanja ny zava-drehetra. Zava-dehibe ny hanatrehan'ny ankizy ny tsy fisian'ity rononon-jaza ity. Izany no mahatonga ny toe-javatra tsy ahafahana mametraka fe-potoana iray izay ahafahana mamelona azy, ary aorian'izany dia tsy ho vita mihitsy izany.
Manala ilay zazakely avy amin'ny tratra
Tadidio fa ny fifangaroana manjavozavo dia tsiambaratelo ara-psikolojika ho an'ny tavy. Ny tsy fisian'ny fanalana alahelo avy amin'ny tratra dia tsy azo atao raha tsy azon'ilay ankizy, amin'ny lafiny iray, amin'ny lafiny ara-tsaina sy ara-batana raha tsy misy ny tratran'ny reny. Ny fifandanjana aorian'ny taona iray dia zavatra tokony hiezahan'ny reny. Raha misy faniriana sy fahafahana hanohy ny fampinonoana sy ny ela, dia tokony hatao izany.
Miala amin'ny fahavaratra sy ny ririnina
Ny fifindra-monina sy ny fifindrana amin'ny famokarana kirizy ary ny fahasamihafana dia samy hafa amin'ny vanim-potoana. Ny zavatra voalohany tokony hotsaroan'ny reny dia ny hoe tokony hahazo ranon-tsakafo ampy ny zaza iray. Izany no mahatonga anao hanome rano bebe kokoa, ranom-boasary. Ary amin'ny fahavaratra, ny habetsaky ny rano dia tokony ho 30% mihoatra noho ny amin'ny ririnina, satria ny hafanan'ny zaza dia sady very fahavitrihana.
Ny fandroana voajanahary avy any amin'ny tratra dia fandroahana izay tsy dia mahatsapa amin'ny zaza. Raha ny mahazatra dia izao no fotoana tsy mila tratra matetika ny zaza raha oharina amin'ny 1-3 isan-jato, ary ny fampiharana dia natao indrindra amin'ny torimaso.
Amin'ny voalohany dia asaina misintona ny sakafo, manolo azy ireo amin'ny fanatodizany. Azonao atao ny tsy mandany sakafo amin'ny fotoana sasany amin'ny andro, ohatra, amin'ny maraina na amin'ny hariva. Mihena tsikelikely ny fampinonoan-tena. Ho an'ny ankizy tsirairay, ny fotoana fifandeferana amin'ny tratran'ny reny dia ho olona. Ny olona iray dia hanana volana ampy, ary misy olona tsy afaka mivoaka amin'ny fampinono mandritra ny enim-bolana.
Noho ny fandrobana ny nono ao amin'ny fanandevozana?
Ny fomba fisintonana dia mety ho hafa. Afaka manangana ny rafitry ny fandroahana i Neny ary manaraka azy, afaka mandao ny zaza mandritra ny fotoana iray izy, na mety hanakivy ilay zaza tsy handray tratra izany. Ho an'ity farany ity dia azonao ampiasaina ny tsiro na ny fijerena ny maso manimba. Azonao atao, ohatra, ny mandentika ny tratra aminao amin'ny zava-mangidy sy mangidy, mba hahafahan'ilay zaza atody. Azonao atao koa ny mamelatra ny volo eo amin'ny nononao, mba tsy ho hafakely na tsy tian'ny sokatra ny nono.
Karoka ho an'ny fandroahana
Betsaka no mino fa azo atao ny mitsonika amin'ny fampiasana fikomiana. " Toy ny hazo tsy maniry ny hazo, ka tsy te haniry ny nono ny zaza ", dia ny teny tokony hitenenan'ilay reny, mijery ny varavarankely amin'ny lohan'ilay zaza.
Fanafody avy amin'ny fampinonoana
Bioparox amin'ny fampinonoana
Ny taom-baovao ho an'ny renim-pianakaviana
Solarium amin'ny fampinonoana
Ny fampinonoana aorian'ny taona
Azo atao ve ny maman-toto-mofomamy?
Inona no pumppouro tokony hofidiako?
Tom Hiddleston dia nanamarika ny dokambarotra marika Gucci
Ny fitsipiky ny tanana tsy hita maso
Naka sary an-keriny i Ciara tamin'ny volana faha-7-n'ny vohoka nandritra ny gazetiboky Harper's Bazaar
5 volana ny fitondrana vohoka - dia firy herinandro maromaro izao?
Karazana rock ho an'ny zazavavy
I Marc Anthony dia manana ny lanjany amin'ny modelin'i Mariana Downing
Fehikibo 2018 - lamaody amin'ny lamaody, fironana, ahoana no hodiany amin'ny 2018?
Skandinaviana ny fomba amam-panao
Mauritius - Fitaterana
Ahoana ny fomba hanamboarana ny volomaso?
Hawthorn - fampiharana
Mastitis amin'ny saka - fitsaboana
Ny ankamaroan'ny vehivavy
Kabine famelomana ho an'ny legioma sy ny voankazo
Iza moa izy, tsara tarehy avy amin'ny fonon'ilay Playboy vaovao?